Siyaasi ku caan baxay aflagaadada iyo nacaybka diinta Islaamka oo ugu dambeyn Islaamay. – Xeernews24
Siyaasi ku caan baxay aflagaadada iyo nacaybka diinta Islaamka oo ugu dambeyn Islaamay.
5. Februar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Joram van Klaveren oo ka mid ahaa Siyaasiyiinta xisbiga xagjirka midigta aadka u fog ee dalka Holand (PVV) ayaa shalay oo isniin ah ku dhawaaqay inuu qaatay diinta Islaamka.
Joram oo horey u ahaa xubin katirsan baarlamaanka Holand caana ku ahaa naceybka iyo dhaleeceynta islaamka, ayaa sheegay inuu qaatay diinta islaamka, kadib markii uu akhriyay buug ka hadlaya Islaamka. Uuna fahmay in wax badan oo uu islaamka ka aaminsanaa ay ahaayeen wax aan sax aheyn.
Siyaasigan oo horey u sheegi jiray in diinta islaamku ay ku dhisan tahay been, quraankuna uu yahay sun, ayaa hadda ugu danbeyn qirtay in hadaladii uu sheegi jiray ay ahaayeen wax qaldan.
waxaa uu intaas raaciyay in siyaasada xisbiga PVV ay ku dhisneyd in wax walba oo islaamka lug ku leg la qaloociyo, qaladna laga dhigo, taasoo uu sheegay iney tahay siyaasad marin habaabib ah oo xaqiiqada ka baxsan.
Joram ayaa noqonayo siyaasigii labaad oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga ku dhisan islaam naceybka oo qaata diinta Islaamka.
Arnoud van Doorn oo ahaa siyaasi ay ninkan horey isku xisbi u ahaayeen, qaateyna diinta islaamka ayaa hambalyo u diray saaxiibkiisii hore oo ay hada diinta islaamka wata qaateen, wuxuuna ugu baaqay dadka naqdiya diinta islaamka iney marka hore baaritaan sameeyaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/diin.jpg 360 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-05 20:55:212019-02-05 20:55:21Siyaasi ku caan baxay aflagaadada iyo nacaybka diinta Islaamka oo ugu dambeyn Islaamay.
Daawo Muhiimada dhulka Sitti ee ay Canfarto xooga ku rabto Xog culus: Magacyadda Horin xildhibaana ah oo Baarlamaanka Kililka laga Caydhin...